NOTICE FOR FILING RETURN, ANNUAL SALARY RETURN AND FURNISHING COMMERCIAL TAX ANNUAL RETURN | Ministry of Planning and Finance
Posted By : ird_editor, Date : 08.05.2018 comment
5. Where to get return forms
The return forms are available free charge at the respective Township Revenue Offices or Medium Taxpayers Office(1), (2) and (3) or Large Taxpayers Office or on the IRD website http//www.irdmyanmar.gov.mm.
Request for Expressions of Interest for Individual Consultant – Translator cum Interpreter (2 Positions)
Interpretation Statement No.7/2019
Request for Expressions of Interest for International position of Information Technology Expert(Individual Consultant)
၂၀၁၆-၂၀၁၇ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်/ဝင်ငွေခွန် အများဆုံးထမ်းဆောင်သည့် လုပ်ငန်းရှင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၅၉) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း